Almost half of Brits plan a holiday in Spain this summer | UK News
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka UK » Ku dhowaad kalabar dadka Ingiriiska ah waxay qorsheynayaan inay fasax ku galaan Spain xagaagan
Wararka Diyaaradaha • Wararka garoonka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Safarka Ganacsiga • Wararka safarka Yurub • Caafimaadka Warka • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Safar Laus • kale • dib u dhiska safarka • Qiimeynta dalxiis • Warka Dalxiiska ee Masuulka ah • Wararka safarka Spain • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Ku dhowaad kalabar dadka Ingiriiska ah waxay qorsheynayaan inay fasax ku galaan Spain xagaagan
41% dadka Ingiriiska ah waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay XNUMX maalmood oo karantiil guri ah ay ku jiraan oo ay ku jiraan tijaabooyin si ay ugu safraan caalamka.
48% dadka Ingiriiska ah waxay tixgelin doonaan inay fasax u qaataan Spain xagaagan.
Tirooyin lamid ah ayaa tixgelin doona safarka meelaha kale 'amber' kulul.
Saddex meelood meel dadka Ingiriiska ah ayaa loo diyaariyey in la tallaalo si ay ugu safraan adduunka.
Cilmi baaris cusub ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad kala bar (48%) dadka Britishka ah ay ka fiirsan doonaan inay fasax u aadaan Spain xagaagan, iyadoo ku dhowaad saddex meelood laba meel - 64% - ay sheegeen inay ka fiirsanayaan da'da 18-34 iyo 52% dadka da'da ah 35-54.
Meelaha kale ee ugu sarreeya ee ay tixgelinayaan dadka Ingiriiska xagaagan waa Talyaaniga iyo Bortuqiiska labaduba waa 46%; halka 45% ay tixgalinayaan Griiga halka 42% ay ka fikirayaan fasax ka dhaca faransiiska. Dibedda Yurub, 37% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay ka fiirsan doonaan fasaxa loo galo USA xagaagan.
Dhamaan meelahan la geeyo waxaa hada dowlada Ingriiska ku qiimeysay inay yihiin wax shidan Tan macnaheedu waa tijaabooyinka 'COVID-19' iyo gooni isu soocidda ayaa looga baahan yahay socotada ku soo laabashada UK. Meelo badan oo sidoo kale u baahan baasaboorro tallaal si loogu soo galo, ku dhowaad saddex meelood meel (74%) oo ka mid ah dadka Ingiriiska ah waxay sheegteen inay diyaar u yihiin inay dhammaystiraan barnaamij tallaal oo buuxa si ay ugu safraan adduunka xagaagan.
Iyada oo ku saleysan shuruudaha amber ee hadda jira ee karantiil guriga ah oo toban maalmood ah iyo tijaabooyin, 41% dadka Ingiriiska ah waxay yiraahdeen waxay diyaar u yihiin inay qabtaan tan si ay ugu safraan adduunka. Kala badh jawaab bixiyaasha (50%) waxay sheegteen inay diyaar u yihiin inay dhamaystiraan karantiil mudo shan maalmood ah iyo waliba tijaabooyinka loo baahan yahay ee COVID-19, halka kaliya 19% ay diyaar u yihiin inay fuliyaan karantiil huteel oo qasab ah muddo toban maalmood ah iyadoo ay 1,750 XNUMX (shuruudaha hadda looga baahan yahay dalalka liiska casaanka ah).
Warka ugu weyn ayaa ah in sidii la filayey, ay weli jirto baahi weyn oo xagga safarka caalamiga ah xagaagan. Way cadahay baaritaankayaga in dadka ugu badan ee Ingriiska ahi ay diyaar u yihiin in si buuxda loo talaalo si ay ugu safraan caalamka. Waa wax lagu kalsoonaan karo in la maqlo maanta in dowladda UK ay qorsheyneyso in fasaxyada xagaaga ee dibedda ay ka dhigto mid dhab ah dadka reer Britain ee si buuxda u tallaalay.